I-China Chlorine Dioxide Sachet 20G (eyongezelelweyo-ukukhutshwa) ukuveliswa kunye neFektri | FIZA
I-Chlorine Dioxide (ClO2) I-Sachet yimveliso ye-klorine dioxide yokuhambisa imveliso ukuze isetyenziswe njenge-deodorizer kunye ne-odor. Iimpuphu ezithile zifakwe kwii-sachets. Xa ziveliswa ukufuma emoyeni, iisachets zivelisa i-chlorine dioxide gas ukutshabalalisa ivumba elibi nelingafunekiyo kwindawo yazo.
I-sachet ifunxa amanzi emoyeni ukukhupha i-chlorine dioxide igesi kwindawo yokususa / yokususa ivumba.
Inkunkuma yezilwanyana kunye neyabantu, i-hydrogen sulfide (ivumba leqanda elibolileyo), i-mercaptans, ii-amine eziphilayo kunye namavumba aveliswa kukungunda, ukungunda, iintsholongwane, intsholongwane, ukungunda, isporo, umsi wecuba, kunye nokutya okonakeleyo i-ordor i-elimator, i-cigarettes i-oder i-elimator, i-boat odor elimator, i-odor yemoto ye-elimator njl.
● izindlu zangasese ● iimoto ● iifriji / iifriji
● Amaziko ezempilo ● iinkonkxa ● kumgangatho ongaphantsi
● ii-closets ● ukuhlamba impahla kuthintela ● iidrowa
● greehouse ● Igumbi lezilwanyana / indlu njl.
Iprofayile yokuKhutshwa kweChlorine dioxide
(jonga kwigumbi lemozulu, ubushushu: 25 oC, ukufuma: 60%)
Umsebenzisi uvula nje iphakheji yangaphandle, axhome, abeke okanye abambelele kwisingxobo sangaphakathi kuloo ndawo eza kupheliswa, kwaye amavumba angafunekiyo ayanyamalala. Xa indawo yokuma eyomileyo yomile kakhulu, kungcono ucofe amanzi kwi-sachet yokuluka. SUKUVULE I-SACHET YANGAPHAKATHI !!!
20 g / sachet: Phatha ama-20 ukuya kuma-40 ft2 esithuba kwinyanga enye.
Olunye ubungakanani bepakethi lunokuveliswa ngokufanelekileyo.
Egqithileyo Chlorine dioksayidi ezimbini zeekhithi
Okulandelayo: I-Chlorine Dioxide Sachets 20G (Ukukhululwa ngokukhawuleza)